Hong Kong Tower | Ohere mepere Top UK Site
E nwere ọtụtụ cha cha oghere egwuregwu dabeere na dị iche iche na obodo gburugburu ma Hong Kong Tower bụ ihe kasị mma ohere mpere elu UK saịtị game. Nke a na egwuregwu nwere ise-esi anwụde, 3 ahịrị na 99 betways i nwere ike imeri site. Isiokwu dabeere na obodo tallest Mmaji elu na-anọchite anya oge a China. The-esi anwụde na-setịpụrụ na nke a-acha anụnụ anụnụ-udo ụlọ elu dị na n'abalị gbara ọchịchịrị. The obodo anya ebube n'ebe ahụ dị elu na ụda nke ihe-arụsi ọrụ ike n'okporo ámá na oyi ifufe ikuku enye a ezi uche obi na-adị. The egwuregwu na-amalite na a nkiri dị ka ihe Intro na ebube graphic mmetụta. Ịkụ nzọ amalite na 20p kwa atụ ogho na ị nwere ike họrọ si dị iche iche ruo £ 100.
Banyere Mmepụta nke Hong Kong Tower
Elk bụ Mmepụta nke a dị ebube elu dabeere ohere mpere elu UK saịtị game, a okike nchepụta nke online ohere mpere. All ha egwuregwu akwụ nnukwu ewu ewu na site na ọrụ dị iche iche dị iche iche online cha cha saịtị. Ha na-playable on mobile phones nakwa dị ka sistemụ kọmputa.
The egwuregwu nwere ụfọdụ pụtara ndịna na yi akara ime ka esi anwụde anya mara mma. E nwere ihe atụ nke a diamond, bonsai osisi, pink Lotus ifuru na gold plated 7. Nke ikpeazụ si ndepụta bụ n'elu payout nnọchianya nke a ohere mpere elu UK saịtị game. I nwere ike imeri ruo 1500 ugboro gị n'osisi ise nke ya ụdị na ifịk paylines. E nwere ise random Chinese akara na-akwụ egwuregwu si ala uru mkpụrụ ego nke 80x ọ bụla. E nwere atọ pụrụ iche na akara na rụọ ọrụ bonus atụmatụ nke game. Ha na-acha uhie uhie na-acha anụnụ anụnụ Yin yangs tinyere egwuregwu si logo.
Mystery Njirimara: Egwuregwu si logo bụ ihe omimi na akara ma ọ na-egosi na ihe niile na-esi anwụde. Nke a na akara nwere ike iyi ka n'ụzọ zuru ezu tụkwasa na-esi anwụde nakwa. All ihe omimi na akara na-ekpughe n'ime ihe ọ bụla otu onye na-isi na akara. Ọwọrọ, a na-arụ ọrụ yiri a ọhịa akara na-enyere gị aka imeri ihe n'ịgwa. Ọ bụrụ na a na akara na-ekpughe n'ime-acha anụnụ anụnụ Yin-Yang mgbe ya mkpa ka ise bonus akara.
ego Ọkwa: na nke a ohere mpere elu UK saịtị game mgbe 3, 4 ma ọ bụ 5 red Yin-yangs apụta, unu na-abanye bonus gburugburu. E nwere atọ wheel nke elu-igwe na ebe n'elu atọ elu. Onye ọ bụla wheel nwere dị iche iche na nọmba nke nzọ multipliers malite 200 ke akpa wheel na 50000 nke-atọ wheel. Aka inwe ọganihu ka ọ bụla larịị, ị ga-ala akụ na wheel-atụ aka na-esote wheel.
Nke a ohere mpere elu UK saịtị egwuregwu nwere nnukwu ego atụmatụ na-ekwe ka ị na-emeri oke ụgwọ ọrụ. The RTP ebe a bụ 96.3% nke dị mma maka ụdị uru ị pụrụ ime ka.